काठमाण्डौको ढलमा पनि कोरोना भेटियो , कारण यस्तो छ ! हेर्नुहोस्
July 4, 2020 1836
काठमाडौंका मुख्य चार स्थान’को ढलको पानीमा गरिएको एक अध्य’यनले त्यहाँ कोरोना भाइरस भएको देखाएको छ। सो अध्ययनमा चार स्थानमध्ये दुई स्थान’का ढलको पानीमा कोरोना भाइरस देखिएको हो। सार्स २ इन्भारोमेन्टल सर्भिलेन्सले २ महिना’देखि काठमा’डौंमा गरेको अध्ययन’मा ढलमा कोरोना भाइर’स देखिएको हो।
सो अनुसन्धान’का मुख्य अनुसन्धानक’र्ता डा दिवेश कर्माचार्यले पछिल्लो १४ दिन भित्रको ढलबाट लिइएको नमुनाको जेनेटिक अध्ययनमा २ स्थानको ढल’मा कोरोना भाइरस देखिएको जानका’री दिए।
उनले भने ‘हामीले कम्तिमा १०० घरको शौचालयको ढल एकै स्थानमा जाने मुख्य चार स्थानको ढलको नमुना लिए’का थियौँ। मानिसको दिशामा समेत कोरोना भाइ’रस रहेकाले त्यो ढल’मा देखिएको हो।’
उनले कोरोना भाइर’स मानिसको दिशा’मा भएको र भाइरस समुदाय गइसकेको संकेत अनुसन्धानले दिएको बताए। उनले भने,‘भाइरस समुदायमा गएको संकेत अध्ययनले देखा’एको छ। तर, लक्षण नभएका संक्रमि’त भएको पनि देखिन्छ। उनीहरुबाट पनि अरुला’ई सर्न सक्छ।
धेरै व्यक्तिको पिसिआर टेष्ट हुन नसके’को अवस्था यसरी अध्ययन गरी ढलमा भाइरस भेटिएका टोलटोलमा परीक्षण गर्न सकिन्छ।’ जनस्वास्थ्य विद डा समीर’मणि दिक्षित भन्छन्,‘लामो समयदेखि समुदायमा कोरोना भाइरस छ कि छैन भन्ने ठूलो प्रश्न थियो, यो अध्ययन’ले भाइरस समुदायमा छ भन्ने प्रमा’णित गरेको छ।’
उनले ढलमा दे’खिनु भनेको धेरै जनामा भाइ’रस छ भन्ने संकेत दिएको बताए। ‘हामीले समुदा’यमा पहिल्लैदेखि भाइ’रस छ भनेर पिसिआर परीक्षण दायरा बढाउ’नुपर्छ भन्दै आएका थियौँ। अध्ययनले पनि त्यही पुष्टि गरेको छ। परीक्षण बढाउनुपर्छ।‘
डा कर्माचार्यले यस्तै अध्ययन ललि’तपुरमा पनि गर्ने योजना रहेको बताए। अध्यय’नको निष्कर्ष स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्राल’यमा समेत बुझाउने उनले जानकारी दिए।
ट्राभल हिष्ट्री नभएका उपत्यकाका बासिन्दा’मा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि. कोरोना संक्रमण समुदा’यमा गएको आंशका गरिएको छ। हालस’म्म उपत्यका’मा देखिएका मध्ये १२ जना संक्रमितको कुनैपनि ट्राभल हिष्ट्री नभएको इपि’डिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। – स्वास्थ्य खबर पत्रिका (फाइल तस्बिर)
Prevब्रेकिङ्….रोपाइँमा प्रहरी र स्थानियबासी बीच झडप…
Nextरचना रिमाल किन रोईन् ? फोटो फिरिममा प्रतापले गाउँदा यसो भनिन् (भिडियोसहित)